mercredi, 24 juillet 2019 09:33
Ho an'ireo mikasa hirotsaka Ben'ny Tanàna na mpanolotsainan'ny Kaominina
Marobe isika no mangataka fiaraha-miasa amin'ny Gasypatriote, na amin'ny toro-hevitra, na ny fepetra sy ny antonta-taratasy ilaina amin'ny firotsahana ho fidiana, na amin'ny serasera pré-campagne sy ny fampielezan-kevitra ho Ben'ny Tanàna. Nanapa-kevitra izahay ny ametraka sehatra manokana hanampy anareo Kandida amin'izany, na Kaominina ambonivohitra, na Kaominina ambanivohitra manerana an'i Madagasikara, na antoko inona na antoko inona, na Kandida tsy miankina. Manana ireo tarehimarika rehetra momba ny Kaominina manerana ny Nosy izahay, ny Birao fandatsaham-bato rehetra, ny isan'ny mpifidy sy ny taham-pahavitrihana isaky ny Biraom-pifidianana, na ny vokatry ny fifidianana 3 nisesy farany teo, izay azo anampiana anareo kandida amin'ny stratejia entinareo hiatrika ny fifidianana. Misy fandraisana anjara ara-bola kosa anefa ny fanampiana anareo Kandida amin'izany.
Any Bruxelles renivohitr’i Belzika ny filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana. Nihaona tamin’ireo tomponandraikitra ao amin’ny Vondrona Eorôpeana izy androany maraina. Manampy azy amin’izany ilay depiote eorôpeana teo aloha Louis Michel, izay namany rahateo. Resaka ny maha mpanohitra azy sy ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara no votoatin-dresaka tamin’izany.
Andrasana amin’ity herinandro ity ny fijoroan’ny governemanta vaovao, tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Hisy ny olom-baovao hiditra raha ny loharanom-baovao. Iza no voatery handao ny samboben’i Ntsay Christian, taorian’ny tomban’ny asa vita tao anatin’ny enim-bolana nisian’ny governemanta voalohany, tamin’izao fitondrana Andry Rajoelina izao ? Mety hotazomina ny isan’ny ministera ho taratry ny fitsitsiana, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Miankina amin’izay governemanta vaovao hijoro eo rahateo ny fandraisana ny didim-panjakana hiantsoana ny mpifidy raha hotanterahina amin’ny 28 oktobra 2019, araka ny tolo-kevitry ny CENI ihany ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna. (Jereo Sary Tohiny)
Mandalo tetezamita ny fitantanana ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco, taorian’ny tamin’ny 24 jona 2019 nahataperan’ny fe-potoana niasan’ny Tale jeneraly teo aloha, Andriamifidy Jean-Louis. Ny filoham-pirenena no manendry amin’ny alalan’ny didim-panjakana izay ho Tale jeneralin’ny Bianco, miainga amin’ny tolotra anarana telo alefan’ny komity mpifantina any aminy.
Vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny EKAR Saint Joseph Mahamasina no nisantarana ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny Antenimierandoholona ny maraina teo. Hitohy etsy amin’ny Lapa maitso Anosikely ny fanokafana ny fankalazana anio tolakandro. Mandritra ity herinandro ity ny fankalazana, tafiditra anatin’izany ny fametrahana samboady ireo Loholona vaovao vao handray ny toerany ao Anosikely, nisolo toerana ireo Senatera voafidy solombavambahoaka. (Jereo Sary Tohiny)
Anisan’ireo fikambanam-paritra naneho ny hafaliany sy fisaorana ny filohan’ny Repoblika ny FITEFA (Fikambanan’ny Teraky ny Faritanin’Antsiranana) tamin’ny nitazomana amin’ny toerany ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, izay zanaky ny Faritany Antsiranana. Mangataka ny mba hanendrena amin’izay ny zanaky ny Faritany ho isan’ireo minisitra handrafitra ny Governemanta vaovao ny FITEFA, nandritra ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety omaly. Nitanisa antony maromaro nanamafisana izay fangatahana miendrika fitakiana izay i Bekasy Johnfrince, filohan’ny FITEFA, toy ny hoe : miantoka ny 38% ny vola miditra amin’ny kitapombolam-panjana ny Faritanin’Antsiranana noho ny otrikarena ananany. Voalohany amin’ny famokarana lavanila ny Faritra SAVA, i Nosy-Be (DIANA) malaza manerantany amin’ny fizahantany sy ireo zavamanitra ary ny trano fandraisam-bahiny manara-penitra hita ao aminy. Porofon’izany ny fisian’ny sidina iraisam-pirenena farafahakeliny in-15 isan-kerinandro.
Tonga tao amin’ny Lapan’ny Antenimieran-doholona Anosikely nanatitra ny fehin-kevitra tapaka nandritra ny fivorian’izy ireo tao amin’ny Carlton ny alatsinainy 15 jolay teo, ny Fivondronan’ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka, androany. Nitarika ny delegasiona i Rakotonirina Jean Claude Roger. Ny Filoha lefitry ny Antenimieran-doholona avy amin’ny Faritanin’i Toamasina, Malo Benoit no nandray azy ireo tamin’izany. Nanazava i Rakotonirina Jean Claude Roger fa maro isan-karazany ny hosoka sy ny tsy fahatomombanana hita soritra nandritra iny fifidianana solombavambahoaka notontosaina farany teo iny, ka tsy tokony hirosoana ny fifidianana manaraka eo raha tsy voahitsy ny lalàna mifehy ny fifidianana, mba hanatsarana ny vokatra. Nambarany fa ny Andrimpanjakana rehetra sy ny Governemanta dia samy hanateran’izy ireo an’io fehin-kevitra io, ho fampahafantarana sy ho fanarenana ny tsy mety rehetra alohan’ny hiatrehana ny fifidianana ho avy. (Jereo Sary Tohiny)
Notontosaina androany teny amin'ny lapan'ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny fanaovan-tsonia famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena teo aloha Andriamatoa Jean max Rakotomamonjy sy ny filoha vaovao Ramatoa Christine Razanamahasoa. (Jereo Sary Tohiny)
- Voafidy ho filoha: Razanamahasoa Christine (IRD/Ambatofinandrahana); - Voafidy ho filoha lefitra Faritany Toliara i Rabenirina Jean Jacques (IRD/Betioky Atsimo); - Filoha lefitra Faritany Fianarantsoa: Razafitsiandraofa Jean Brunelle (IRD/Ikongo); - Filoha lefitra Faritany Antananarivo: Rasolonjatovo Honoré dit Papasolo (IRD/Faratsiho); - Filoha lefitra Faritany Toamasina: Michelle Bavy Angelica (IRD/Fenoarivo-Atsinanana); - Filoha lefitra Faritany Mahajanga: Rahantinirina Lalao dit Ninà (IRD/ Mahajanga I);- Filoha lefitra Faritany Antsiranana: Rahelihanta Jocelyne (IRD/ Antsiranana I).
Hankalazaina amin'ny alatsinainy ho avy izao ny faha 60 taonan'ny Antenimieran-doholona na ny SENAT, ka atomboka amin'ny fanompoam-pivavahana hiarahana amin'ny be sy ny maro ny maraina ary ny tolakandro kosa dia hisokatra mandritra ny telo andro ny valandresaka ho an'ny rehetra, izay atao eo amin'ny parking ny Sénat ihany, arahina fifanakalozan-kevitra izay tarihin'ny filohan'ny Antenimieram-doholona Rivo Rakotovao. (Jereo Sary Tohiny)